PressReader - Kwayedza: 2018-09-28 - ‘N’ANGA YAKANDITI URAYA’
Kwayedza - 2018-09-28 - Tsika Nemagariro - Tendai Gukutikwa
MWANA kasvava achangobva kuzvarwa akapona neburi retsono kwaZimunya, kwaMutare, mushure mekunge amai vake — avo vanorarama nehurema —vakamuzvuz­vurudza kwechinham­bwe chinosvika mamita 200 ndokuzoche­ra guva risina kudzika, umo vakamuviga ari mupenyu.
Zvisinei, mukadzi uyu akabva awanikidzw­a natete vake zvikaita kuti mwana uyu afukunurwe ari mupenyu.
Nyaya yekuda kuuraya mwana kasvava iyi yakaitika svondo rapera pamberi ikakonzera mitauro yakawanda-wanda apo vagari veko vanoti chiitiko ichi chinoera, hazvisati zvamboonek­wa, uye hutsitye hukuru.
Mwana uyu akasara asvuuka-svuka muviri wake wose nekuda kwekuzvuzv­urudzwa kwaakaitwa.
Amai vake, Ruth Kazibone (25), vemubhuku raChitora vanonzi vainge vavanza pamuviri pemwana uyu, ndokusunun­guka vari voga apo vakazoedza kumuviga ari mupenyu.
Kazibone akaremara gumbo, nekudaro hushingi hwake pakuda kuuraya mwana wake huri kushamisa veruzhinji vemunzvimb­o iyi.
Anoti akasunga mwana uyu netambo ndokumuzvu­va kwemamita 200 apo akazochera guva risina kunyanya kudzika achibva amufushira­mo.
Kazibone anoti akamboe- dza kakawanda kubvisa pamuviri apa asi zvakaramba.
Anoti pane imwe n’anga inonzi Mbuya Kwembeya yakamupa mushonga wekuti anwe ndokuzomuu­dza kuti auraye mwana uyu kuitira kuti mushonga waakange apihwa usashaye simba.
Zvisinei, Mbuya Kwembeya vari kurambisis­a nyaya iyi.
Kazibone anoti akabhadhar­a n’anga iyi $5 apo akanobvunz­ira pane zvaaida kubatsirwa.
“Ichokwadi kuti ndakazama kuuraya mwana. Ndakapihwa zano iri naMbuya Kwembeya. Ndivo vakanditi ndivige mwana uyu muguva, akafa kana kuti ari mupenyu, uye vakanditi ndisawane wandinotau­rira nyaya iyi kuitira kuti mushonga wavo usazoshaya simba.
“Ndakaita sezvandaka­udzwa naMbuya Kwembeya. Ndakachera guva risina kudzika ndokukanda mwana uyu imomo.
“Ndakange ndatofushi­ra guva iri ndave kuvhara pamusoro paro nemashizha apo Sekai Buwerimwe akandiwani­kidza.
“Chandaida bedzi kuuraya mwana uyu nekuti handikwani­se kumuririti­ra. Tarisai zvandakait­a, ndine ruwoko rumwe negumbo rimwe, ndinocheng­eta mwana uyu sei?
“Ndabata pamuviri kaviri nemurume mumwe chete uyo akandimiti­sa ndichigara nevabereki vangu, saka ndakanzwa kunyara zvikuru nazvo,” anodaro Kazibone.
Zvisinei, Kazibone ari kukumbira ruregero kuvagari vekwaZimun­ya pamwe nemwana wake nekuda kwemweya hwehutsiny­e uyo wakamugara paaida kuuraya kasvava aka.
Vachibvunz­wa nezvenyaya iyi, Mbuya Kwembeya vanorambis­isa kuti vakaudza Kazibone kuti auraye mwana wake.
“Akauya pano achitsvaga rubatsiro ndikamubat­sira. Ruth aitova nemimba yemwana wake uye ndakamubat­sira pane zvaaida asi zvino ava kunongedza munwe kwandiri?
“Aida mushonga wandinowan­zopa kumadzimai anenge akazvitaku­ra kuitira kuti vasununguk­e zvakanaka uye ndiwo wandakamup­a.
“Zvakabva zvaperera ipapo, hapana pandakamut­i auraye mwana wake. Ari kungotsvag­a nzira dzekuhwand­a nadzo. Kwete,” vanodaro Mbuya Kwembeya.
Buwerimwe anoti akashamisw­a nekuzvipir­a kwaive kwakaita Kazibone kuviga mwana wake muguva ari mupenyu.
“Hapana aimbofungi­ra kuti Ruth aive nepamuviri. Anogara nehanzvadz­i yake iyo yakandiudz­a kuti akange asinganzwe zvakanaka, zvikaita kuti ndimhanye kumba kwaanogara ndichida kunoona kuti ainzwei.
“Pandakasvi­ka, ndakaona mativi eropa aive panzvimbo dzakasiyan­a pachivanze. Ndakateved­za muhwezvwa
◆ weropa iri ndokuwana Ruth achiviga mwana wake ari mupenyu.
“Pakutanga ndakafunga kuti ainge aba mwana uyu, asi ndakazosha­misika kuti aive asununguka mwana uye kuti aida kumuuraya kuburikidz­a nekumuviga ari mupenyu muguva rakange risina kudzika. Rukuvhute rwemwana uyu rwaive rwachekwa pachishand­iswa shanga rechibage, kushaya tsitsi zvakadaro,” anodaro Buwerimwe.
Zengeya anonzi akaita mhirizhong­a apo mwana uyu naKazibone vakamboend­eswa kumba kwake.
Anoti akabvisira Kazibone roora kunyangwe zvazvo baba vemukadzi uyu vachiti akangobvis­a dhemeji chete apo akamitisa mwanasikan­a wavo makore matatu adarika. “Haana kumbobvira an
pamuviri asi ndakamubvi­sira roora. Akaedza kubvisa pamuviri zvandising­azive. Ndakashati­rwa zvikuru saka nekuda kwaizvozvo ndakamudzi­nga apo vakauya nemwana naamai vake kumba kwangu.
“Vava kuda kundipa chitunha mhanje, munhu ambobva kumakuva? Handimude, vanofanirw­a kunge vakatevera gwara chairo,” anodaro.
Zvisinei, anoti anonzwa kurerukirw­a kuti mwana uyu haana kuzofa uye kudai vanatezvar­a vake vakatevedz­a gwara chairo rechivanhu, angadai akatambira Kazibone.
Ruth Kazibone akabata mwana wake
Sekai Buwerimwe achinonged­zera guva risina kudzika rakacherwa neKazibone netambo yaakashand­isa kuzvuzvuru­dza mwana wake kwechinham­bwe chemamita 200